स्वप्निल यात्रीसंग दुइ रात « Sagarmatha News
स्वप्निल उडान भर्ने एउटी विन्दास युवतीको नाम सम्झदा तपाइको दिमागमा को आउंछ ?
धेरैका लागि सहज प्रश्न होइन यो ।
मलाई सोध्नुहुन्छ भने एकै क्षणमा उत्तर भन्छु, सरला गौतम ।
उनलाई मैले धेरै पछ्याएको छु ।
धरान धनकुटा हिले हुंदै कच्ची वाटोवाट किमाथांकासम्म पुग्दा होस् वा क्याराभान फिल्मका स्वर्गीय नायक थिन्लेसंग कुरा गर्न डोल्पा जांदा होस्, साथ लागेको छु ।
थिन्लेले उनलाई खवर पठाएका थिए, हाम्रा चौंरी मरेका कुरा सिंहदरवारमा सुनाइदेऊ है भनेर । त्यो खवर सिंहदरवारलाई सुनाइन् कि सुनाइनन् । मलाइ अझै कौतुहलता छ ।
लेखक सापकोटा आफ्नो स्वर्गीय कुकुर सेवलसंग
सरलासंगै चितवनका गाऊघर डुलेको छु, उनीसंगै नेपालको पश्चिम नाका महेन्द्रनगर पुगेर सीमामा दुख पाइरहेका नेपालीहरुका कथा सुनेको छु ।
मेरो काम त पछ्याउने हो, पछ्याइरहे । उनलाई यति धेरै पछ्याउंदा पनि उनले मलाइ चिनेकी थिइनन् । किनकी उनीलाई मैले संगसंगै हिंडेर पछ्याएको होइन ।
शव्दमा पछ्याएको हो । उनका आलेखहरु भेटेसम्म नछाडी पढेको हो । अलिकति फुर्सद मिल्यो कि एउटा झोला वोकेर एक्लै निस्कि हाल्छिन् देश डुल्न । नेपाली साहित्यमा वा लेखनमा मैले पछ्याउने अत्यन्त थोरै लेखक छन्, त्यसमा सरला पनि एक हुन् ।
कोरोना महामारीले संसारलाई त्रस्त वनाएको समयमा केही महिना अगाडि सुत्नु अघिको एकरात ।
म्यासेन्जरमा सरलका लागि टेक्स्ट लेखे ।
सरलाजी, डुमेरो (यो हालै सार्वजनिक भएको सरलाको उपन्यास हो) कहिले वजारमा आउंछ ?
लेखे । मेटे । लेखे । फेरी मेटे ।
उनको फेसवुक पेज हेरे । त्यहां डुमेरोको कतै चर्चा छैन ।
मैले पछ्याइरहेकी एक लेखकले उपन्यास लेखिसकेकी छिन् तर यसको वारेमा कुनै सार्वजनिक जानकारी छैन । किन त?
अन्तत टेक्स्ट पठाए ।
सरलाको उत्तर तत्कालै आयो, तपाइलाई कसले भन्यो ?
मलाइ कसैले पनि पुस्तकको वारेमा भनेका छैनन्, त्यही भएर तपाइलाई नै सोधेको, मेरो जवाफ थियो ।
सरलाले मेरो कुरामा विश्वास गर्न सकिरहेकी थिइनन् ।
मैले उनलाई पुस्तकको कभरको तस्विर पठाइदिए । चकित हुने पालो उनको थियो ।
नाम समेत सार्वजनिक नभएको पुस्तकको कभरको तस्विर सात समुद्र पारी अमेरिकावाट पठाइदिंदा अचम्मित हुनु पनि स्वभाविक नै हो ।
प्लीज नाम सार्वजनिक नगरिदिनु है, उनको सोझो आग्रह थियो, उपन्यासको वारेमा कसैलाई पनि जानकारी छैन ।मैले उनको पुस्तक किनिसकेको जानकारी गराए ।
पुस्तक सार्वजनिक गर्न सम्पूर्ण तयारी भइसकेको रहेछ । सो परिवेशमा संसारभर पुस्तक पुर्याउन एमाजोन लगायत केही अनलाइनहरुलाई उपलव्ध गराइएको रहेछ । मैले त्यही मौका छोपे ।
मौका छोप्नु अघि एउटा क्लु भने उनकै फेसवुकवाट पाएको थिए । उनको एक निकट मित्रले आउन लागेको पुस्तकको लागि वधाइ दिएको सन्देश देखेको थिए ।
उनका फेसवुक पोष्ट हेरे । वजारमा आएका नयां पुस्तकहरुका सुचि हेरे । कतै चर्चा थिएन । अनि एमाजोनमा कुनै सुचना छ कि भनेर खोजी गर्दा त पुस्तकनै पाए । किनिदिए र वने, डुमेरोको पहिलो पाठक ।
डुमेरो आफैंमा अनौठो नाम हो । उपन्यास पढ्नु अघि नामको अर्थ पनि खोजिन । मलाइ अर्थ खोज्नु थिएन, मलाइ त सरलाको लेखन शैलीमा रमाउनु थियो । उनी संगसंगै उपन्यासभरी संगै हिड्नु थियो । उनका पात्रहरुसंग कुराकानी गर्नु थियो । पछि मात्रै अर्थ खोजे, कुनै गन्तब्य विहीन यात्रामा निस्किएको घुमन्ते अन्वेषकको अर्थ राख्ने यो शब्दले एकैसाथ अनेक प्रतीकात्मक अर्थ वोक्ने रहेछ । उपन्यासमा मुलपात्र सिमरनकी आमाले पटक पटक छोरीको वानीलाई सिकायत गर्ने क्रममा कति डुमेरो लगाएर जीवन विताउंछेस् भनेर गुनासो गरिरहन्छिन् ।
जव उपन्यास पढ्न थाले । तानिरह्यो । एउटी मस्तराम युवतीलाई प्रमुख पात्र वनाएर लेखिएको ३२६ पृष्ठ लामो उपन्यास पढ्न दुइ रात लाग्यो । तानिरह्यो । नतानोस् पनि किनत ? हाम्रै समाजलाई लेखेकी छिन् । अलिकति विद्रोही युवतीको आंखावाट । उपन्यासको सुरुवात पढ्दा लाग्छ, सरला आफ्नै जीवन लेख्दैछिन् । हरेक परिवारका कथा कछन् । एउटा सानो सहरवाट करियर खोज्दै काठमाडौ पुग्ने युवतीको कथा भन्छिन् । कथामा संघर्ष छ, सम्झौता छ । मस्ती छ । पीडा छ । उनले पाठकलाई घटनामा समाहित गर्न सक्छिन् । किनारवाट हेर्ने साक्षी मात्रै होइन ।
विगतमा आफैं सञ्चारकर्ममा रहेकी सरलाले श्रीषा हत्याकाण्ड देखि पत्रकारिताका विकृतिहरुलाई उपन्यासमा उधिनेकी छिन् । सिनेमाका पर्दाभित्रका पीडाहरु सार्वजनिक गरेकी छिन् । प्रेमको वाटोवाट हिंड्दा भोगिने अनुभूतिहरु छन् । विपश्यना देखि वोष्टनसम्म पात्रहरुसंगै यात्रा गराउंछिन् । राम्रा पुस्तकहरु प्रकाशन गर्दै आएको नेपालयले प्रकाशन गरेको यो उपन्यासमा आआफ्नै धारणा पाठकहरुले वनाउन सक्छन्, तर पढिन्जेल तानिरहन्छ । युवतीको प्रेमकथाले त युवा मनहरुलाई काउकुति लगाउंछ । जीवन भोग्ने शैली आआफ्नो हुन्छ, सरलाको जीवन जिउने शैली र उनको लेखन शैलीले मलाइ तान्छ । शायद धेरैलाई तान्छ होला ।
मैले उनको पुस्तकको समिक्षा गरिरहेको छैन । उनी आफैं एउटा राम्रो समीक्षक पनि हुन् । राजनीतिक र सामाजिक विकृति विरुद्ध सशक्त कलम चलाउंदै आएकी सरलाको पहिलो कृति डुमेरोले उनको कलमको शिल्पलाई डगमगाउन भने पक्कै पनि दिने छैन । धेरैधेरै शुभेच्छा प्रिय लेखक ।
(तस्विरमा म संगै भएको प्रिय सेवलको निधन भइसकेको छ । सरलाको उपन्यास डुमेरो पढ्दा रातभर ऊ मेरो छेऊमा वसेर साथ दिएको थियो । मिस यु सेवल)
अमेरिकाको एक मानवरहित अन्तरिक्षयानले एउटा निकै महत्त्वकाङ्क्षी अभियानअन्तर्गत ३० करोड किलोमिटरभन्दा पर...
कोरोना भाइरस: दीर्घ कोभिड हुँदा यी ‘चार भिन्न समस्या’
‘दीर्घ कोभिड’ अर्थात् कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको दीर्घ प्रभावका कारण मानिसहरूलाई चार भिन्न समस्या...
दुर्गमबासीको सेवामा रमाएका डाक्टर
बालरोग विशेषज्ञ डा. कलेब बुढाले डाक्टरी काम थालेको पाँच दिनमा जाजरकोट भूरकी...
अमेरिका निर्वाचन २०२०: आगामी राष्ट्पतिले भारतका निम्ति के गर्न सक्छन्?
ह्वाइट हाउसमा आयोजित अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान समारोहमा पाँच नयाँ अमेरिकी नागरिक उपस्थित...
गत वर्ष चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण यति बेला नेपालमा...